Rosia - Wikipedia
Mbola ambangovangony amin'ny resaka rosia ity lahatsoratra ity ary tokony hofenoina.
Российская Федерация ((ru))
Federasionan'i Rosia ((mg))
Teny ofisialy fiteny rosy1
Tanàna ngeza indrindra Moskva
- Président du gouvernement Repoblika firenena federaly
- Rano (%) faha 1
- hakitroka faha 8
141 800 000 mpo.
Anaran'ny mponina Rosy, rosianina
IDH (2008) (mitombo) 0,802 (ambony) 67
Sandam-bola Robla (RUB)
Fiozao ny ora UTC +3 hatramin'i +12
Hiram-pirenena Hiram-pirenenan'i Rosia
Ny Rosia (amin'ny fiteny Rosy : Россия , Rossija?) na amin'ny endrika ofisialy Federasionan'i Rosia (Российская Федерация, Rossijskaja Federacija?) dia firenena ngeza indrindra eo an-tany, manana isam-ponina 142 tapitrisa (araka ny census natao tamin'ny 2007). Eo anelanelan'ny Eoropa jeografika (25,3%n-ny fivelarany) sy ny Azia atsinanana (74,7%). Ny firenena rosy dia manam-pivelarana 17 tapitrisa km2 (in-2 ny Etazonia ary in-30 ny Madagasikara). Manana faritra ora raika ambin'ny folo izy. Ny renivohiny dia Moscou, fiteny Rosy ny teny ofisialy any ary Rouble ny sandam-bola ampiasainy.
Na dia misy ranomasina maromaro aza ny manodidon'i Rosia, manana toetrandro ara-kontinenta ny rosia amin'ny tany mangatsiaka sy sarotra ipetrahan'ny olona.
Betsaka ny harena an-kibon'ny tany any Rosia : Misy ny solika sy ny vato. Mivoatra be ny industrie mikasika ny fanamboarana sambon-danitra sy ny fanamboarana basy. Ny fanamboarana sambon-danitra ny nampavoalohan'ny Rosia nizaha ny habakabaka toalohany tamin'ny 1957.
Ny repoblika sosialista federativan'i Rosia (RSFSR) dia repoblika lehibe indrindran'i Vondrona Sovietika.
Tamin'ny faran'ny taona 1991, misy firenena vaovao dimy ambin'ny folo avy amin'ny URSS taloha, ao koa ny Rosia, nandova ny 3/4 ny (17 tapitrisa km²) URSS taloha, ny antsasaky ny mponiny, 2/3 ny industria-ny ary ny antasaky ny sahany.
↑ ((ru))http://www.gks.ru/bgd/free/b09_00/IssWWW.exe/Stg/d06/8-0.htm, Jiona 2009
↑ ((en)) UNDP
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Rosia&oldid=767977"
Firenena avy amin'ny URSS
Voaova farany tamin'ny 18 Aprily 2015 amin'ny 08:07 ity pejy ity